अपमानको विषको घडा पिएका माधव नेपालमाथि किन हुँदै छ बारम्बार धोका ? - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
अपमानको विषको घडा पिएका माधव नेपालमाथि किन हुँदै छ बारम्बार धोका ?
२०७७ भाद्र २७, शनिबार ०८:४६:००
काठमाडाैँ-करिब नौ महिनादेखि चलेको नेकपाको शक्ति संघर्षले नयाँ भावभूमिमा अवतरण गरेको छ । नेकपाका वरिष्ठ एवं प्रभावशाली नेता माधवकुमार नेपालको काँधमा टेकेर प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि प्रहार गर्न तम्सिएका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अन्ततः ओलीसँगै विलीन भएका छन् । र, माधव नेपाललाई किनारामा धकेलेका छन् ।
नेकपामा माधव नेपाललाई अपमानपूर्वक साइड लगाइएको यो नै पहिलोपल्ट होइन । ओलीले नेपाललाई अपमानीत गर्न केसम्म गरेनन् ?
पार्टी एकताकै बखत माधव नेपाललाई बाइपास गरेर ओली र दाहालले भित्री लेनदेन गरेका थिए । पार्टी एकताका बेला नेपाललाई फड्के किनाराको साक्षी समेत बनाइएको थिएन ।
नेपाल पक्षलाई कमजोर बनाउन ओलीले एकता र पार्टी समायोजनकै बेला दाहाललाई ठूलो भाग दिएर नेपालमाथि पक्षपात गरेका थिए ।
नेपाल पक्षका प्रभावशाली नेतालाई पाखा लगाएर, वरीयतामा तल पारेर, चुनावमा टिकट नदिएर, छानीछानी हार्ने ठाउँमा पठाएर ओलीले जसरी हुन्छ आफ्नो गुट बलियो बनाउने रणनीति लिएका थिए ।
भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसालजस्ता प्रभावशाली नेतालाई सचिवालयमा नराखी बाहिर पारेका थिए । स्थायी समितिमा पनि यस्तै पक्षपातपूर्ण तरिकाले जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेका थिए ।
ओलीको अपमान सहेर पनि नेपालले पार्टीभित्र विधि र पद्धतिको पक्षमा अडान त्यागेनन् । ओलीभित्र नेपालप्रति कुन हदसम्म प्रतिशोध र घृणाको भावना छ भन्ने कुरा स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दा समेत नलिएको प्रसंगबाट थाहा हुन्छ ।
ओली सिंगापुरमा उपचार गराउन जाँदा पार्टीको बैठकमै नेपालले स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका थिए । तर, ओलीले मृत्युको कामना गरेको आरोप लगाउँदै त्यस्तो शुभकामना नै चाहिँदैन भन्दै नेपाललाई अपमानीत गरेका थिए । पार्टीको वरीयतामा पनि कहिले झलनाथ खनाललाई त कहिले माधव नेपाललाई तलमाथि पारेर मर्यादामा ठेस पुर्याउने काम गरेका थिए ।
वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालले कालकूट विष पिएर नेकपाभित्र ओलीको सर्वसत्तावादविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका छन् । उनले आगामी महाधिवेशनसम्मै पार्टीभित्रको एकमनावादविरुद्धको मुद्दा लिएर जाने रणनीति बनाएका छन् ।
२०४८ पछि कांग्रेसको विशाल संगठन र सत्ताका सबै संयन्त्रमा प्रभाव रहेका बेला तत्कालीन नेकपा एमालेलाई जोगाउने काम गरेका थिए । २०४७ को संविधान बनाउँदादेखि २०६२-६३ को आन्दोलनको अगुवाइ समेत नेपालले गरेका थिए ।
देशमा हत्या, हिंसा र विध्वंशको शृंखला चलेका बेला नेपालले जोखिम मोलेर सिलिगुडीसम्म पुगेर माओवादीसँग वार्ता र संवादको सिलसिला चलाएका थिए । वामदेव गौतमलाई वार्ताका लागि रोल्पा पठाएका थिए ।
१२ बुँदे समझदारी र त्यसपछिको शान्ति प्रक्रियामा पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै हाराहारी नेपालले भूमिका खेलेका थिए । त्यतिखेर कोइराला र प्रचण्ड दुवैले माधव नेपालबिना कुरै नगर्ने अडान समेत पटकपटक लिएका थिए ।
वार्ता निकै जटिल अवस्थामा पुगेका बेला गाँठो फुकाउन नेपाल पुग्ने गर्थे । कतिसम्म भने एकपटक प्रचण्ड गिरिजाकहाँ जानै डराएका थिए । र, माधव नेपाललाई लिन कोटेश्वरस्थित उनकै निवास पुगेका थिए ।
नेपालको यो पृष्ठभूमि, सक्रियता, त्याग र समर्पणलाई सम्पूर्णतः बिर्सेर आज ओली र प्रचण्डले जालसाजीपूर्ण तरिकाले जुन भित्री लेनदेन गरेका छन्, त्यो अवश्य पनि ती दुवै नेतालाई महँगो पर्ने निश्चित छ । किनभने, नेकपामा ओली र दाहालभन्दा पनि नेपाल शक्तिशाली छन् । संगठनमा उनको पकड बलियो छ ।
जनतामा ओली र दाहाल दुवै अलोकप्रिय सावित भइरहेका छन् । अझ दाहालले त एउटा डिफल्टर ठेकेदारको आश्रयमा बसेको र सुमार्गीजस्ता सन्दिग्ध व्यापारीसँगको सम्बन्धका कारण पनि निकै बदनामी कमाइसकेका छन् ।
माधव नेपालसँग एक से एक क्षमतावान नेताको पंक्ति छ, जुन ओली र दाहालसँग छैन । यो पंक्तिलाई लिएर महाधिवेशनमा जाने हो भने ओली र दाहाल एक ठाउँमा उभिँदा पनि नेपाल बलिया हुनेछन् ।
अझ अहिलेकै सहमतिअनुसार ओलीले दाहाललाई नेतृत्व छाडिदिएमा पूर्वएमालेको ठूलो पंक्तिले विद्रोह गर्न सक्नेछ । त्यतिखेर माधव नेपालको पल्लाभारी हुनेछ । यही बुझेर नै नेपालले बाहिर धेरै केही नबोलीकनै भित्रभित्रै महाधिवेशन लक्षित तयारी गरिरहेका छन् ।
उस्तै परे आउँदो महाधिवेशनसम्म दाहाललाई ओलीले पनि साइड लगाइसक्नेछन् । त्यतिखेर दाहाल र वामदेव गौतम दुवैले नेपालको शरणमा पुग्नुपर्नेछ । अहिलेको दुई अध्यक्षको चोचोमोचोमा अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि सन्तुष्ट छैनन् ।
ओलीको माछो माछो भ्यागुतो रणनीतिबाट पटकपटक जिल्लिइसकेका दाहाल र गौतम पुनः जिल्लिनेछन् र आमनजरबाट पनि खुइलिनेछन् भन्नेमा माधव नेपाल ढुक्क छन् । त्यसकारण उनले आफ्नो अडान छाडेका छैनन् ।
माधव नेपालले बेग्लै धार किन पनि जीवित राखेका छन् भने ओलीको संकीर्णताबारे उनी राम्रैसँग परिचित छन् । ओलीले अरुको योगदानको कहिल्यै कदर गर्न जान्दैनन् र सीमित घेराभित्रबाट चल्छन् भन्नेमा नेपाल स्पष्ट छन् ।
त्यसैले ओलीको त्यस प्रवृत्तिविरुद्ध पार्टीलाई जोगाउन र पूर्वएमालेभित्रको इमानदार पंक्तिको आशा डग्मगाउन नदिन नेपालले विधि र पद्धतिको मुद्दामा अडान लिइरहेका हुन् । यही अडानमा रहेर उनी महाधिवेशनमा जाने स्पष्ट देखिएको छ ।